Bibikely matavy - ohatrinona ny tavy matavy dia mila isan'andro?
Sakafo voajanahary - tombony sy fahasimbana amin'ny vatan'olombelona
Mba hanamafisana ny fahasalamana sy ny fiarovana amin'ny aretina izay mampivelatra amin'ny fampiasana sakafo mahatsiravina, dia ilaina ny mieritreritra ny sakafo ara-dalàna, ny antsipiriany ary ny fandanjana ny sakafo isan'andro. Ny fiantraikany lehibe amin'ny zavamananaina velona dia omena amin'ny alatsinainy sy ny alim-pito, izay levona amin'ny vola midadasika avy amin'ireo mpanome sakafo haingana.
Inona no atao hoe tavy matsiro?
Ny tavy sira dia vondron-tsakafo izay misy sira fetsy maina. Ireo sorona ireo dia tsy manaiky ny mety hisian'ny fifamatorana roa na telo tapitrisa, ka ny atôma kônôma dia misy fifamatorana tokana. Ny isa farany ambany indrindra amin'ny atôma karbôna dia 3, ary ny atomika dia mahatratra atoma 36. Ny tena mampiavaka azy dia ny fitomboan'ny hafanan'ny rivotra amin'ny ampahany mivantana amin'ny isan'ny atôma.
Miorina amin'ny fototra niaviany izy ireo:
Sakafom-biby misy bibikely (anatiny, tavy fotsy, voankazo, ronono ronono);
Avy amin'ny zavamaniry (ala tropikaly: menaka palmie, menaka voanio).
Sakafo voajanahary - tombony sy ratsy
Raha mandinika ny vokatra misy tavy matsiro ianao, dia azonao atao ny mamintina fa ao anaty sakafo. Ny tombontsoa na ny fahasimbana izay atolotra amin'ny vatana, dia miankina mivantana amin'ny habetsahan'ny fihenan'ny zavatra toy izany. Mba hahitana ny sary iray manontolo, dia zava-dehibe ny mandinika ireo toetra tena ilaina amin'ny sira ary ny manimba, izay indrisy fa maro.
Sakafo voajanahary - tombony
Ny tombontsoa azo avy amin'ny tavy matsiro dia toy izao manaraka izao:
Manome ny fampidirana ireo dingana amin'ny fampidirana hormonina ao amin'ny vatana;
mampirisika ny dingan'ny fanamafisana ny vitamina sy ny singa trace;
misy fiantraikany amin'ny fiterahana (indrindra ho an'ny lehilahy);
Ny fampiasana moderina dia manome ny vatana amin'ny hery matanjaka, mamela anao hahatsapa fifaliana ary tsy mahatsapa ny tsy fisian'ny angovo.
Fetsy sira - manimba
Karazan-tsakafo hafa mampidi-doza sy tsy mampidi-doza no matavy, ary vokatry ny fanodinana menaka. Ireo dia molekiola miovaova voajanahary natsangana tamin'ny alàlan'ny fitsaboana hafanana. Ilaina ny mahatakatra fa kely dia kely izy ireo, efa eo amin'ny ankamaroan'ny sakafo. Amin'ny fampiasana hafanana ny fatina dia mety hitombo hatramin'ny 50%. Ny fatin-kibo dia mahazatra amin'ny famokarana sakafo haingana, entana entana sy vokatra hafa, izay rehefa mahandro ny hafanana amin'ny alaina.
Miaraka amin'ny fanesoana mahery vaika, ny satry sy ny fatin-tsakafo dia manana fiantraikany ratsy eo amin'ny fahasalaman'ny olombelona, ​​izay tsy miseho amin'ny soritr'aretina manokana, fa amin'ny fihanaky ny aretina mitaiza. Ny aretina ara-pahasalamana izay miteraka sakafo matavy be dia be no raisina:
fampandrosoana ny diabeta;
fanitsakitsahana ny fizotry ny metabolika ao amin'ny vatana.
Sakafom-bosaka - ny norma isan'andro
Rehefa avy nanapa-kevitra ny voka-dratsin'ny olona toy izany amin'ny vatan'ny olona salama ianao, dia mila mamaritra mazava tsara ny habetsahan'ny voankazo matsiro isan'andro. Eto, toy ny amin'ny toe-javatra iray hafa, ny anjara asam-peo dia lalain'ny habetsahana sy ny fifantohana. Voamarina fa ny salan'isa tsara indrindra dia manodidina ny 15-20 g isan'andro. Ity endri-tsoratra ity dia mitovy amin'ny lehilahy sy ny lehibe, na inona na inona lanja sy ny taona. Ny fandaniana ny fatran-tsakafo dia hanao ratsy bebe kokoa noho ny tsara.
Raha ny fatin-dite, ho azy ireo ny tahan'ny tsimok'aretina tsara indrindra, izay tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny vatana, dia 3-4 grama (na 2% ny kaloria manontolo) isan'andro. Tokony ho raisina an-tsakany fa izy ireo dia karôzôgena, afaka mihaona ao amin'ny vatana mandritra ny taona maro ary koa tsy maneho marika mazava amin'ny fahasimban'ny fahasalamana mandritra ny fotoana maharitra.
Mba hisorohana ny fatra be loatra amin'ny ampahany tsara indrindra isan'andro amin'ny saka matsiro, dia ilaina ny mandinika ny filazan'ny sakafo. Amin'ny vokatra sasany, ireo mpanamboatra dia manondro ny sandan'ny satry matsa. Raha tsy misy ny mari-pamantarana toy izany, dia tokony ho dinihina ny mari-pahaizana momba ny sakafo. Ny vinaingitra matavy kokoa dia heverina fa mihoatra ny 17.5% ny tavy amin'ny vokatra vokatra.
Aiza no misy ny satroka feno satroka?
Ny fampiasana azy ireny amin'ny sehatra indostrialy dia mahasoa satria matetika no mihoatra ny atmosfera ny tebiteby, izay midika fa mihamitombo ny mari-pana sy ny haitao. Noho izany, ny fampiasana ny menaka sy ny fatin-danja dia matetika mahazatra eo amin'ny famokarana sakafo, izay tsy maintsy miharatsy haingana, fa misy tsipika lava lava. Ny famakafakana ny vokatra misy siramamy manitra dia afaka manangana vondrona lehibe toy izao:
vokatra vita amin'ny tavoahangy (misy miankina mivantana amin'ny isan-jaton'ny zavatra matavy);
sakafo avy amin'ny sakafo haingana;
Inona no ilaina ho an'ny hena?
Sarobidy sy ratsy ny lapoaly ao Beijing
Karohy fohy taorian'ny fampiharana
Mihinàna ao amin'ny Karemy
Nahoana no ilaina ny tain-dalan'ny ranomasina?
Koala nohavaozina dia tsara sy ratsy
Ireo vokatra misy zinc
Bicycle for loss of weight
Manaova fanatanjahan-tena isan'andro amin'ny maso manga
Ravinkazo savoy - fampiroboroboana sy fikarakarana
Sakafo - Fambolena sy fiahiana
Ahoana no iatrehana ny fanevatevana?
Ny akanjo 17, izay tokony hatsipy, ary tsara kokoa - ny mandoro
Clothes Lohataona-Summer 2014
21 sakafo izay azo amidy amin'ny ankizy sy ny ankizy
Ahoana no hahazoana vokatra tsara amin'ny akoho?
Lavash roll miaraka amin'ny trondro mena
Ririnina Winter 2015-2016
Ny soritr'aretina amin'ny saka - ny soritr'aretina malaza indrindra amin'ny aretina